Shift Kwenzeka 2009 | Martech Zone
IShift Yenzeka ngo-2009
NgoMgqibelo, Januwari 9, 2010 NgoLwesine, Juni 11, 2015 Douglas Karr
Ushintsho nomlayezo ku- Shift Kuyenzeka kuyamangalisa. Ngenkathi ikhuluma ngokwamukelwa okusheshayo kwemithombo yezokuxhumana nobuchwepheshe, ngisaveza ukuthi izinombolo ezinkulu zisamele izingxenyana ezincane uma kukhulunywa ngokwamukelwa kwabantu abaningi. Amabhizinisi asenesikhathi sokuzivumelanisa, ukwamukela nokuthola isabelo semakethe uma esebenza manje.
Chofoza ukuze uthumele uma ungayiboni i- Shift Kuyenzeka kokuphakelayo noma i-imeyili yakho.
Angikhathali yilezi! Sibonga u @sbahle_mpisane ngokungikhombisa lona.
Tags: 2009shift kwenzeka
Ukubuka kuqala okuphelele kwe-HTML 5
Amamethrikhi wokuguqulwa webhulogi lebhizinisi
Jan 11, 2010 ku-9: 14 AM
Sawubona Doug, ungaqiniseki ukuthi uyazi noma cha, le vidiyo ekuqaleni yadalelwa ukuxhasa incwadi ebizwa nge-Socialnomics ~ Ngangithumele kulokhu ku-Q4 2009 ~~> http://bit.ly/erikqualmann
Thanda isiza sakho nokuthanda kwakho i-SM!
Jan 11, 2010 ngo-6: 38 PM
Ngisola ukuthi imithombo yezokuxhumana ifana ne-SEO noma ukumakethwa kwe-imeyili: ngelinye ithuluzi ebhokisini lamathuluzi elizobaluleka emashumini ambalwa eminyaka ezayo. Yebo, kuzoba nzima kakhulu futhi izindlela zizoshintsha, kepha ngokusobala akuyona imfashini. Futhi akuyona yonke into.
Lokhu akusho ukuthi izinkampani akufanele zitshale imali ekusebenziseni manje, kepha akufanele ziphume umxhwele uma zingakwenzi.